Health – Alinyaung
မျက်စိမှုန်သူများအတွက် ဆေးစွမ်းကောင်း (နတ်မျက်စဉ်း)
May 21, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
အခုကျနော်ပြောမဲ့ နတ်မျက်စဉ်းဆေးနည်းက အမှတ်(၁၃၄)၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော နက္ခတ္တရောင်ခြည် မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖတ်ခဲ့ရတာပါ။ မသိလိုက်ရသေးသော သူများအတွက် သိသင့်တယ်ထင်လို့ ကျနော်က ပြန် လည် တင်ပြတာပါခင်ဗျာ။ ကျနော်က ပြန်လည်တင်ပြတာဆိုပေမဲ့လဲ စာရေးသူ နစ်နာ မှုမရှိစေရန်အတွက် မဂ္ဂဇင်းထဲတွင် စာရေးသူ ကိုယ်တိုင် […]
ကျန်းမာနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ မိန်းမကိုယ်လေးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ ?
အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ များသောအားဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ အလွယ်တကူ မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ပိုပြီးအလေးထားတတ်ပြီး တတ်နိုင်သမျှ သန့်ရှင်း ကျန်းမာအောင် ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်းနှီးပြီး မေ့နေတတ်တဲ့ အရာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ မိန်းမကိုယ်ပါပဲ။ ကျန်းမာသန့်ရှင်းတဲ့ မိန်းမကိုယ်အဖြစ် ထိန်းသိမ်းခြင်းကိစ္စကို လျှော့မတွက်သင့်ပါဘူး။ မိန်းမကိုယ်ကို ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းအောင်၊ ကျန်းမာအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် […]
အိပ်ယာနားမှာ သံပုရာသီးတစ်ခြမ်း ထားအိပ်ခြင်းရဲ့ အံ့သြစရာရလာဒ် (၆)ခု
သံပုရာသီးဟာ ၄င်းမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီကြောင့် အစွမ်းထက်ပြီး ကောင်းကျိုးအာနိသင်တွေ ဖြစ်စေတာကို လူတိုင်း သိကြပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအားမြင့် သံပုရာသီးကို ဖျော်ရည်တွေ၊ ဟင်းပွဲတွေမှာ ထည့်သွင်းစားသုံးလေ့ ရှိကြသလို အအေးမိ ဝေဒနာကို ကုသဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါကတော့ လူအများစု သိထားကြတဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လူသိပ်မသိသေးတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ […]
May 15, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
အညာမြေမှာ အမြဲစိမ်းနေတဲ့ တမာတွေက အရိပ်တင်ရတာမဟုတ်ဘဲ ဆေးဖက်လည်းဝင်သတဲ့။ အညာဒေသကိုအလည်သွားတဲ့အခါ နေ့လည်ပိုင်းမှာ နေတွေပူတယ်ဆိုပေမယ့် ညဘက်ရောက်လာတဲ့အခါ အိမ်ရှေ့ ကွပ်ပျစ်လေးထွက် လက်ဖက်စား ရေနွေးကြမ်းသောက်ရင်းနှာခေါင်းထဲမှာ သင်းသင်းလေးမွှေးလာတဲ့ အနံ့လေးတစ်ခုရှိတတ်တာသတိထားမိကြလား။ အဲ့ဒါကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ အညာမြေမှာမှရနိုင်တဲ့ တမာနံ့သင်းသင်းလေးပါ။ တမာကို ဆေးဝါးတွေအတွက်အသုံးပြုသလို အစားလည်းဆေး ဆေးလည်းအစာဆိုတဲ့အတိုင်း အချဉ်တည်စားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ အခုဆောင်းပါးလေးထဲမှာ အညာမြေရဲ့ […]
လက်ကိုင်ဖုန်းကို အိပ်ယာဘေးချထားပြီး မအိပ်သင့်
လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရေးကြီးသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတစ်ခုကို မိတ်ဆွေများအတွက် မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်မှာ ဟန်းဖုန်းများ ပေါများစွာ ပေါ်ပေါက်လာပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူ လူတိုင်းနီးပါး အသုံးပြုလာနေကြပါပြီ။ လူအများဟာ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ အများဆုံး အသုံးပြုနေကြပြီး ခေါင်းအုံးအနားမှာပဲချထားကာ အိပ်ပျော်သွားတတ်ကြပါတယ်။ လက်ကိုင်ဖုန်းအတွင်းမှာပါတဲ့ နည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း ထုတ်လွတ်ပေးပြီး ရေဒီယိုလှိုင်း […]
ကန်စွန်းရွက်ကို လူတိုင်းကြိုက်လို့စားနေကြတယ်..။ ဒါတွေကို တော့လူတိုင်း မသိကြပါလား
ကန်စွန်းရွက်၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ (ကောင်းလွန်လို့နေတိုင်းတောင် စားသင့်ပါသည်လို့ အကြံပြု့ ပါသည် ) သင့်ချစ်ဇနီးက ကန်စွန်းရွက်ကြော်၊ ကန်စွန်းရွက်သုပ်၊ ကန် စွန်းရွက်ချည်ရည်ဟင်း စသဖြင့် ကန်စွန်းရွက်ကို ပင်တိုင်စံ ဟင်းတစ်ခွက်လို မပါမဖြစ် ချက်ပြုတ်ကျွေးတဲ့အခါ “ဒီနေ့ လည်း ကန်စွန်းရွက်ပဲလား ကွာ” […]
အသက် ၁၉ ၊ ၂၀ အရွယ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်အဆီတက်လာခဲ့ရင် အစားအသောက်အနေအထိုင်သတိထားပြီး ဗိုက်အဆီလေးရှိလာရင် Detox သောက်တာ ဝမ်းနှုတ်ဆေးလေးတစ်ကြိမ်လောက်သောက်လိုက်တာ အိပ်ထမတင်လုပ်တာမျိုးတွေနဲ့ ခဏအတွင်း အဆီကျ ဗိုက်ပြန်ချပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီထက်အသက်နည်းနည်းပိုရလာတာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗိုက်ခေါက်ထူလာမယ်၊ ဗိုက်အဆီကိုချရခက်လာပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ။ အစားလည်းလျှော့ရတာအမော ပျားသံပရာလည်းသောက်ရတာအမော ဒီလိုနေထိုင်နေပါလျက် […]
မလိုချင်သော နေရာကမှဲ့ကို သဘာဝနည်းဖြင့် ဖယ်ရှားနည်း.
May 11, 2018 ErhekjqGPBzWQaQNQM 0
ဒီတခါတော့ မလိုအပ်တဲ့ မှဲ့(Mole)ကို သဘာဝနည်းဖြင့် ဖယ်ရှားပစ်တဲ့ နည်းလမ်းများအကြောင်း ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။ (1) ပန်းသီးရှာလကာရည်ကို ဝါဂွမ်းစလေးဖြင့် တို့ယူပြီး မှဲ့ပေါ်သို့ပွက်တိုက်ပေးပါက ၂ရက်အတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ (2) ကြက်သွန်ဖြူကို အစေးထွက်အောင် ကွင်းလှီးကာ မှဲ့ပေါ်သို့ကပ်ပြီး ဆေးပလာစတာဖြင့် လေလုံအောင် ဖိ့ကပ်ပေးထားလိုက်ပါ။ ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ (3) […]
ဆံပင်ကျွတ်သူတွေအတွက် အံ့အားသင့်စရာ ဆံပင်ပြန်ပေါက် ဆေးနည်း (၄) မျိုး
လူတိုင်း အထူးသဖြင့် ဆံပင်ကျွတ်တဲ့ ပြသနာ ခံစားရသူတွေဟာ လှပတဲ့ဆံကေသာနဲ့ ဆံသားထူထူလေး ပိုင်ဆိုင်ချင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ပြသနာခံစားနေရသူတွေအတွက် ဒါကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ့် နည်းလေးနဲ့ အကြံဥာဏ် တချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖယောင်းပူ ဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ကို ရေနွေးထဲ အရေပျော်စေပြီး အဲဒီရေကို ခေါင်းလျော်ဖို့ အသုံးပြုပါ။ (၂) […]